Posted by moi at 11:23 AM No comments:
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၊ ပရဟိတစေတနာရှင်များ၊ လူမှုအသင်းအဖွဲ့များမှ လစဉ်ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုထိုက်သူများကို ရွေးချယ်၍ ပြည်သူသို့ကျေးဇူးတင်လွှာ ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအတွက် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုထိုက်သူအဖြစ် မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့ယွင်းမှုများဖြင့် မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာသော်လည်း မလျှော့သောဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယတို့ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ကာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သူ မထူးထူးမွန်ကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုထိုက်သူ အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးမှ ဇွန် ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Steve Marshall အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၃)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၃)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ မေးခွန်း(၄)ခု မေးမြန်း ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ (၂)ခု ဖတ်ကြား တင်ပြခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း (၁)ခု အတည်ပြုခြင်းနှင့် အဆို(၁)ခု ဆွေးနွေး အတည်ပြုခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
အမျိုးသား လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၂)ရက်မြောက်နေ့ အစည်းအဝေးကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၂) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Myanmar Ranking Improves
The U.S. State Department said on Tuesday that Myanmar is no longer one of the world’s worst offenders on human trafficking and removed Myanmar from the blacklist of foreign governments who use child soldiers.
Pyithu Hluttaw Speaker U Win Myint receives New Zealand’s Ambassador
Pyithu Hluttaw Speaker U Win Myint received H.E. Mr. Steve Marshall, Ambassador of New Zealand to Myanmar at the Pyithu Hluttaw Building Hall in Nay Pyi Taw at 2:00 pm yesterday. During the meeting, they discussed matters relating to legislative sectors, investments, bilateral friendships, cooperation and democratic transition in Myanmar.
Mahn Win Khaing Than, Amyotha Hluttaw Speaker, received H.E. Mr. Steve Marshall, New Zealand’s Ambassador to Myanmar at the Amyotha Hluttaw Building Hall, Nay Pyi Taw at 3:00 pm yesterday.
2nd Pyithu Hluttaw 5th regular session 23rd day meeting
In the Pyithu Hluttaw meeting held yesterday, Minister of State for Foreign Affairs U Kyaw Tin responded toaquestion by U Hla Htay Win of Zeyathiri constituency on arrangements made by the government on objecting and resistingaresolution by United Nations Human Rights Council forming and sendingaRakhine State fact-finding mission.
Deputy Construction Minister discusses Kayah road plan at Amyotha Hluttaw
Deputy Minister for Construction U Kyaw Lin told the Amyotha Hluttaw that the Kayah State budget allocated funds in FY 2018-2019 to upgradeaportion ofaroad in Taunggyi Township.
Myanmar workers from Thailand return Myawady
Thousands of Myanmar workers from Thailand arrived back in Myawady started from yesterday morning through 999 gate of Myawady.
Cargo vessels handed over to IWT
A ceremony to hand over six cargo vessels as part of the joint Myanmar-India Kaladan Multimodal Transit Transport Project was held at Sittway port in Rakhine state on 26 June, according toapress release of the Inland Water Transport (IWT) yesterday.
Two industrial zones to be built in Haka and Paletwa
Two industrial zones will be built in Haka and Paletwa townships in Chin State in next financial year, according toastatement issued by the Information and Public Relations Department (IPRD) yesterday.
State Counsellor chooses Ma Htoo Htoo Mon as the person of honour for June
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor has been selecting the person who is worth congratulating from among the citizens, philanthropists and social societies monthly, releasing their names to make words of thanks known to the public. Ma Htoo Htoo Mon was selected as the person who is worth congratulating for the month of June 2017. Ma Htoo Htoo Mon was born with inborn physical disabilities and brought up.
Amyotha Hluttaw Speaker Mahn Win Khaing Than received Mr. Pasit Sirimalai, Representative Myanmar of Universal Peace Federation (Asia) and members at the Amyotha Hluttaw Building Hall, Nay Pyi Taw, at 1:30 pm yesterday.
President U Htin Kyaw accepts credentials from ambassadors of South Africa and Mexican States
Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge, the newly-accredited Ambassador of the Republic of South Africa to the Republic of the Union of Myanmar, presented his Letter of Credence to U Htin Kyaw, President of the Republic of the Union of Myanmar, at Presidential Palace, Nay Pyi Taw at2pm yesterday.
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs, received newly accredited Ambassador of the Philippines to Myanmar Mr Eduardo E. Kapunan, Jr. at 10 am and Ambassador of Nepal to Myanmar Mr Bhim K.Udas at 10.45 am yesterday at the Ministry of Foreign Affairs respectively.
Rakhine State Chief Minister delivers aid to villagers
Rakhine State Chief Minister U Nyi Pu met with villagers in southern Maungtaw yesterday, delivering aid to the villagers.
Magway black sesame to be exported to Japan and Europe
Black sesame cultivated in Magway will be exported to Japan and Europe, according toapress release issued yesterday by the Ministry of Commerce.
Union Minister for Information receives Norwegian Ambassador
Union Minister for Information Dr Pe Myint received Ambassador of Norway to Myanmar Mrs Tone Tinnes at his office in Nay Pyi Taw yesterday.
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received New Zealand Ambassador Mr. Steve Marshall at Bayinnaung guesthouse yesterday. In the meeting, they discussed about breeding dairy cattle and producing dairy products, technical assistance in researching
A community centre and mobile library were opened in Nay Pyi Taw yesterday with an opening ceremony at the office building of Pyinmana’s Information and Public Relations Department. The community centre and mobile library areacollaborative effort between the Ministry of Information and the Daw Khin Kyi Foundation.
တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေး မြို့နယ်အဆင့် အသိပေးရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
မော်လိုက် ဇွန် ၂၈
မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် USAID ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက် မြို့နယ်အဆင့် အသိပေးရှင်းလင်းပွဲကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် မော်လိုက်ခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနနှင့် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်း၍ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရုံးတွင် လူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန (Community Centre) အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုး၌ ၂၀၁၇ခုနှစ် World Tree Day နေ့ အထိမ်းအမှတ် စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပ
လားရှိုး ဇွန် ၂၈
၂၀၁၇ ခုနှစ် World Tree Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို လားရှိုးမြို့ ၊ ထင်းရှူးတောင်ဧရိယာ၌ ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီ အချိန်က ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ပြီးလျှင် ဒုတိယအကျယ်ဆုံးတိုင်းဒေသကြီး တစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအနေဖြင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် တတိယအများဆုံး တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု တိုးတက်စေရန်အတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် သစ်တောများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးသစ်တောဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး မယ်စဲ့မြို့နယ်အတွင်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး
မယ်စဲ့ ဇွန် ၂၈
ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမော်မော်သည် ဇွန် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကယားပြည်နယ် မယ်စဲ့မြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် မြို့ရှောင်လမ်းနှင့်မြို့တွင်း မြို့ကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမျိုးသန့်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
The Myanmar Investment Commission (MIC) announced yesterday 10 areas which will be given priority when entrepreneurs submit their investment proposals.
Pyithu Hluttaw discusses new government housing project, meat slaughter tenders
Nay Pyi Taw Council Member U Aung Myint Tun told the Pyithu Hluttaw yesterday that 43 government staff housing complexes are planned in Nay Pyi Taw in FY2017-2018, costing approximately Ks16 billion. A separate construction project is planned for retired workers and rental residences for government staff.
Tatmadaw naval vessels, civilian fishermen and military divers continued to search for wreckage ofaChinese-made Y-8 Myanmar military transport plane that crashed into the Andaman Sea on7June with 116 people aboard, according toareport yesterday by the Myanmar News Agency.
Union Minister for Information inspects Pekhon Township IPRD office
Union Minister for Information Dr. Pe Myint inspected Pekhon Township Information and Public Relations Department (IPRD) office and met with the staff yesterday morning.
Aung La Nsang and Vitaly Bigdash both confident about 30 Junerematch
Mixed martial arts fighters Aung La Nsang of Myanmar and Vitaly Bigdash of Russia attendedapromotional event at Junction Mawtin yesterday for their upcoming 30 June match. Aung La Nsang fought and lostaclose fight against VitalyBigdash in January in Indonesia. At that time, Bigdash had fought and won nine MMA matches and while Aung La Nsang had won 19 of 29 matches.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ထံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘော တူညီပြီးဖြစ်သော သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အဲဒွါဒို ကပူနန် ဂျူနီယာ သည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ၎င်း၏ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို ပေးအပ်သည်။
Posted by moi at 11:36 PM No comments:
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Christian-Ludwig Weber-Lortsch အား တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန တို့ကို ဗဟိုအဆင့် ပြန်လည်ပူးပေါင်း ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 11:02 PM No comments:
Posted by moi at 10:46 PM No comments:
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ(၁)နာရီတွင် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ်(၁၃) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအ‌ဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ကူဘိုတာ ကုမ္ပဏီ၏ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားသည်။